नेपालका कुनै पनि गा.वि.स., वडा तथा नगरपालिकामा सेवा प्रदान गर्न सक्षम छौं
नेपालका कुनै पनि गा.वि.स., वडा तथा नगरपालिकामा सेवा प्रदान गर्न सक्षम छौं	By कल्पना शर्मा on	२१ भाद्र २०७३, मंगलवार १३:४९
· अन्तर्वार्ता, आर्थिक
डिशहोमको बिक्रि तथा सेवा संजाल नेपालभर रहेको छ । नेपालका कुनै पनि गा.वि.स., वडा तथा नगरपालिकामा हाम्रो सेवा प्रदान गर्न हामी सक्षम छौं ।
कल्याण अधिकारी, नायव महाप्रबन्धक, डीस होम
डीस मिडियाको अवस्था कस्तो छ ?
६ वर्षको अन्तरालमा हामीले बजारको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छौं ।
हाल बजारमा केवल, सिमटिभी लगायतले पनि सेवा दिईरहेका छन्, यस्तोमा ग्राहकले डीसहोम नै किन रोज्ने ?
डिशहोमको बजार सम्पूर्ण नेपाल हो । तपाईंले नाम लिनुभएका सेवा प्रदायकहरु हालसालै मात्र यो क्षेत्रमा आउनुभएको हो । नेपाल भर सेवा विस्तार गर्न उहाँहरुलाई कठिन छ । शहरी क्षेत्रमा उहाँहरुले सेवा प्रदान गर्न सक्नुहोला तर ग्राहकहरुलाई गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्नु ठुलो चुनौती छ । शहरी क्षेत्रमा सेवा नियमित रुपमा दिनका लागि पावर ब्याक अप, तारहरुको उचित ब्यवस्थापन गर्न पनि उहाँहरुलाई समस्या हुनसक्छ । आफ्नो सेवालाई गुणस्तरिय बनाउनका लागि ठुलै लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तपाईंले नाम लिनु भएका प्रदायकहरु केवल (तार) प्रविधि बाट संचालन हुन्छन् । उहाँहरुको जस्तो प्रविधि हाम्रो होइन । हामी स्याटेलाइटबाट सिधै ग्राहकको घरमा जोडिन्छौ । जसका कारण निरन्तर रुपमा उच्च क्वालिटिको HD च्यानलहरु प्रशारण गर्न हामी सक्षम छौं ।
डिशहोमको शहरी क्षेत्रमा उल्लेख्य उपस्थिति छ । ग्राहकहरुले HD च्यानल तथा हाम्रो बिक्रि पछिको सेवाका कारण हामीलाई रोज्नुभएको हामीले पाएका छौ । अर्को बजार भनेको नेपालको ग्रामिण क्षेत्र हो । भौगोलिक विकटता र वनावटले गर्दा त्यहाँ तार तानेर टिभि हेर्ने अवस्था हाम्रो छैन । जहाँ तार तानेर टिभी हेर्न असंभव छ ती क्षेत्रमा कुनैपनि सेवा पुग्न सक्ने अवस्था छैन । डीटिएच सेवा भनेको नेपालको जुनसूकै क्षेत्रमा पनि पुग्न सक्ने भएकाले भौगोलिक अवस्थाले कुनै फरक पार्दैन । अर्कोकुरा गुणस्तरमा पनि हामी अगाडि छौं । त्यसैले डीस होमको सेवा लिन छाडेर अन्य ग्राहकको रोजाई हुनै सक्दैन । क्लिन फिड लागू हुँदा डीसहोमका उपभोक्तालाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?
यो देशले कति राजस्व उठाउने भन्नेसँग सम्बन्धित छ । राजस्व वृद्धि हुने कुरालाई हामी पनि स्वागत गछौं । क्लिन फिड भनेको बिज्ञापन रहित च्यानल भनेर बुझ्छौं । यसलाई नीतिगत तहमा ल्याउन सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नुपर्छ । सरकारले च्यानलहरु बिज्ञापन रहित ल्याएर तपाईहरुले चलाउनुहोस् भनेर पत्राचार भयो भने हामी यसलाई चलाउँछौ । यो त राष्ट्रलाई आर्थिकरुपमा फाईदा पुग्ने कुरो हो । यसले सकारात्मक नै प्रभाव पार्छ । तर नेपालमा हेरिने हरेक विदेशी च्यानलहरु क्लिन फिडमा छैनन्, त्यसलाई पनि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारे पनि ठोस निर्णय आएको देखिदैंन ।
केवल टिभीहरु पनि डिजिटल प्रविधिमा आईसकेका छन्, उनीहरुले पनि HD क्वालिटी फिड दिईरहेका छन्, यस्तो समयमा प्रतिस्पर्धा चर्को होला नी त ? केवल टिभीहरुले पनि ब्यापार बढाउने उदेश्यले क्वालिटीमा ध्यान दिईरहेका छन् । बजारमा आईसकेपछि ग्राहक तान्ने सोचले मार्केटिङ गर्नु स्वभाविकनै हो तर डीस होमले दिने क्वालिटी र अरुले दिने क्वालिटीमा तुलना गर्नै मिल्दैन । बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविक हो तर यस प्रतिस्पर्धाले हामीलाई राम्रो गरेको छ । अब ग्राहकहरुले अन्य सेवा प्रदायकसंग हामीलाई तुलना गर्नुहुन्छ र डिशहोम के कारणले गुणस्तरिय छ भन्ने थाहा पाउनु भएको छ ।
डीसलाई घना बादल, वर्षात् हुँदा सिग्नल राम्रो नआउने गुनासो सुनिन्छ नि ?
यो कुरा भनेको झण्डै २ बर्ष अगाडीको अवस्था थियो । तपाईले भनेजस्तै सुरुवाती अवस्थामा डीसमा कहिलेकाहिं समस्या आउने गथ्र्यो । तर विगत २ वर्ष देखि हामीले नयाँ स्याटेलाईबाट सेवा दिईरहेका छौं । पानी पर्दा वा मौसम परिवर्तनले या स्याटेलाइटमा कुनै असर गर्दैन । अहिले तपाईहरुले पनि ग्राहकहरुलाई सोध्न सक्नुहुन्छ सिग्नल कस्तो छ भनेर ।
डीस होमले HD क्वालिटी सेवा दिईरहेको छ अब Ultra HD मा जाने योजना बनाउनुभएको छैन ?
हामीले अहिले ग्राहकलाई True HD को सेवा दिई रहेको छौं । समयको अनुकुलता हेरेर Ultra HD का च्यानलहरु समेत ल्याउने योजनामा छौं ।
डीसहोमले कस्ता कस्ता प्याकेजहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ, सबैभन्दा लोकप्रिय कुन हो ?
हाम्रा प्याकेजहरु एघार वटा छन् । डिशहोमका सम्पूर्ण प्याकेजहरु लोकप्रिय छन् तर ग्रामिण क्षेत्रमा विक्ने रु २९२ को Basic प्याकेज र सहर बजारमा विक्ने रु ५८५ को सम्पूर्ण च्यानल आउने Lifestyle HD प्याकेज बढि लोकप्रिय छन् । हामीले तीन महिना पहिले launch गरेको नेपाली सिनेमाहरु प्रशारण हुने Plus Movie प्याकेजहरु पनि अत्यन्त लोकप्रिय छन् ।
डीसहोमको युनिक सेलिङ पोईन्ट USP के हो ?
सबैभन्दा पहिले त डीस होमले जून सेवा ग्राहकहरुलाई प्रदान गरिरहेको छ, त्यहि नै हाम्रो युनिक सेलिङ पोईन्ट हो । बजारमा जतिपनि सेवाहरु आईरहेका छन्, ती सबै छाडेर ग्राहकहरु डीस होम खोज्दै आउनुहुन्छ, यो अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भयो । त्यस्तै नेपालमा कुनैपनि गाविस वा नगरपालिकाका हरेक वडाहरुमा पुग्न सक्ने क्षमता डीस होमले राख्छ । त्यस्तै महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ग्राहकको सन्तुष्टिलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्दै आएका छौं । डीसहोममा कुनैपनि प्रकारको समस्या आयो भने हाम्रा सपोर्ट सेन्टरबाट तुरुन्तै प्राविधिकहरु समस्या भएको ठाउँमा जान्छन् र कतिपय अवस्थामा त फोनबाटै पनि समस्याको समाधान हुने गरेको छ । भन्नु पर्दा हाम्रो सेवा संजाल, नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा पुग्न सक्ने क्षमता, गुणस्तरिय पिक्चर, सहुलियत मुल्य नै हाम्रो USP हुन् ।
डिशहोमको सेवामा समस्या आए अथवा च्यानल तथा सिग्नलमा समस्या आयो भने कसरी निवारण गर्न सकिन्छ ?
डिशहोममा समस्या खासै आउँदैन । आइहाले पनि ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गरेर तुरुन्तै समस्या निवारण गर्न सकिन्छ । प्राविधिक घरमै पठाउनु पर्ने अवस्था आयो भने पनि नेपालको कुनै पनि नगरपालिका हुन् वा दुर्गमका गाविस हाम्रा प्राविधिक त्यहाँ पुगेर ग्राहकहरुलाई सेवा दिन सक्षम हुनुहुन्छ ।
तपाईहरुको ग्राहक लक्षित उदेश्य र रणनीति कस्तो छ ?
हाम्रो नेपालमा लगभग २१ लाख टिभी सेट भएकाे डेटाले देखाउँछ । हाम्रो लक्ष्य अबको ५ वर्ष वा सन् २०२० सम्म केबलमा झण्डै बजारको ८० प्रतिशत बजार लिने हो । यो हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौं । प्रत्येक वर्ष ग्राहकको संख्या बढ्दो क्रममा छ । हाम्रो २÷४ वर्ष काम गर्ने अनि रिजल्ट जेसुकै होस् भन्ने सोच होईन । हामी लामो समय काम गर्न चाहान्छौं । ग्राहकलाई जहिलेपनि स्तरीय सेवा दिन सकियोस् भन्ने चाहना हुन्छ । शहरी क्षेत्रको लागि HD च्यानलहरु ४० वटा पुर्याउँदैछौं । स्ट्याण्डर्ड डेफिनेसनको च्यानलहरु १५० वटा पुर्याउँदैछौं । नयाँ स्याटेलाईट लिएर नयाँ च्यानलहरु थप्दैछौं ।
अन्त्यमा डीसहोमका ग्राहकहरुलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?
डीस होमले कुनैपनि केबल सेवा प्रदायक कम्पनीले अहिलेसम्म दिन नसकेको गुणस्तरिय सेवा दिने काम गरेको छ । जहाँ सञ्चारका कुनै माध्यम छैनन्, त्यस्तो ठाउँमा ग्राहकलाई गुणस्तरी सेवा प्रदान गरिरहेको छ । हामीले हरेक चिजको छनोट गर्दा सबैभन्दा पहिले गुणस्तरलाई ध्यान दिनुपर्छ । गुणस्तरीय सेवा दिन सकियो भने मात्रै ग्राहकको मन जित्न सकिन्छ । यो हिसाबले डीस होम सक्षम सावित भईसकेको छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सेवा लिईसकेपछि ग्राहकलाई दिने बिक्रि पछिको सेवा हो । यो पक्षमा डीसहोमले आफूलाई प्रमाणित गरिसकेको छ । ग्राहकलाई डीस होमको सेवामा कुनैकुरा चित्त नबुझे तुरुन्तै ग्राहक सेवा केन्द्र, वेवसाइट वा फेसबुक पेज मार्फत खबर गर्न सक्नुहुन्छ । हामी तुरुन्तै सेवा दिन्छौं । डिशहोममा चित्त बुझे अरुलाई खबर गर्नुहोला । गुनासो भए हामीलाई भन्नुहोला ।